Izindawo Omkhulu EYurophu Ukuze Vakashela NgoMashi | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izindawo Omkhulu EYurophu Ukuze Vakashela NgoMashi
minat Akukephuzi ukuhlela ukuphunyuka ngoMashi, phambili we Easter rush. Nge izingane ngokuba eholidini, Manje yisikhathi sokuthola ithuba lokuvakashela iziqhingi ezincane ezihlotshaniswa nomuntu othandekayo, asukela omkhulu wokuqala uhambo lomndeni lokuhamba konyaka, Gxila eminye yemizi emhlabeni imilingo kakhulu nobe hambela imikhosi amaningi aseYurophu ngoMashi. Kunezindawo eziningi ezinhle eYurophu Ukuvakashela ngoMashi.
njengoba kushiwo, Mashi futhi ekuqaleni kwesizini umkhosi eYurophu, ngakho kukhona amathani amathuba okuzakhela sokwenama ngenxa bendawo, kungaba ngesikhathi ezisawolintshi-eliphefumulelwe zomkhosi eningizimu yeFrance, noma London Coffee Festival.
Ukulungele ukuthola izindawo Omkhulu eYurophu Ukuze Vakashela ngoMashi? Funda ku!
izindawo Omkhulu eYurophu Vakashela ngoMashi: London
Njengoba Bathi, “a bad day in London is still better than a good day anywhere else” so of course, London bekufanele sibe ohlwini lwethu lwezindawo ezinhle eYurophu Ukuvakashela ngoMashi.
Mashi uyinyanga enkulu ukuvakashela Kensington Palace Gardens, weKew Gardens, noma yimiphi ILondon enye izingadi eziphezulu, njengoba kwamadwala crocuses kanye daffodils eziqhakaza yonkana inhlokodolobha.
Uma ucabangela ngokuvakashela eziningi phezulu ezikhangayo, ke sincoma ukuthola ngokwakho izivakashi Isaphulelo ikhadi noma bhasi ithikithi combo. Lezi amathikithi futhi izinyanda ayengakwenza imali engathí sina!
Sesikhathele abalandeli enkulu ikhofi. Sibhale ngisho mayelana emangalisayo ikhofi izitolo lapha ngaphambi. Ngakho, lapha kungenye ukubhala mayelana njengengxenye izindawo wethu Omkhulu eYurophu Ukuze Vakashela ngoMashi – London ikhofi umkhosi ngoMashi!
I 2019 UK Coffee Isonto Runs kusukela 30-31 Mashi 2019. Ama-top baristas nezazi zekhofi bahlangana ndawonye eBrick Lane ukuzobungaza ikhofi. Kuzoba ezingaphezu kuka 250 ikhofi ingcweti gourmet nezitebele zamahhashi ukudla, tastings nemiboniso, workshops interactive, ukudla emgwaqweni, cocktail ikhofi ezisekelwe, umculo bukhoma, DJ, yezobuciko kanye nokunye okuningi.
Ufuna ukwazi okwengeziwe futhi uthole amathikithi? Inhloko phezu lapha: https://www.londoncoffeefestival.com
ILyon ukuya eLondon Eurostar Sitimela
Okunye Imigubho yaminyaka yonke Mashi eLondon
Joyina emncintiswaneni waminyaka yonke i Day St kaDavide imikhosi eLondon namalungu Welsh, imikhosi ukudla, kanye lombhoxo. 1 Mar
Tuck ibe isitaki okumnandi pancake noma crepes ku Pancake Day (Shrove ngoLwesibili) e-London, noma ukubamba zonke isenzo Pancake-phezulu ngesikhathi uhlanga Pancake. 5 Mar
Phatha umama wakho usuku out eLondon Usuku lomama. Uzothola amaningi fun izinto ukwenzani umama, kuhlanganise ntambama zezinkambi, emfuleni cruises, yezitolo, nomculo. 31 Mar
Sample besizulu entsha, khona lapho kudayiswa khona utshwala izinkambo, futhi ihlangane nabanye cider, ubhiya, kodwa, nabalandeli be-lager eLondon Beer Week. TBC
Maastricht eLondon Izitimela
Bruges eLondon Izitimela
Liege eLondon Izitimela
izenzakalo London Mashi ezemidlalo
Vikela indawo wokubuka ezinhle kanye iThames Championship Course kulenyanga ukubona ukugwedla nabasebenza ezivela emhlabeni wonke ukuthwala Inhloko eMfuleni Race labesiFazane Eights iNhloko River Race. 16 futhi 30 Mar
Joyina abagijimi noma eceleni abukele njengoba London Izimpawu zokubekisa zase Isigamu Marathon wind ngendlov Westminster kanye City of London. 24 Mar
Ukuze uthole olunye ulwazi izindawo Omkhulu eYurophu Ukuze Vakashela ngoMashi eLondon, sibheke yethu imicimbi yekhalenda futhi guide you to ukuthi yini e-London. Futhi ukubamba okuhamba phambili kwe-esigabeni London zethu yaseshashalazini Umhlahlandlela.
izindawo Omkhulu eYurophu Vakashela ngoMashi: Zermatt eSwitzerland
Uma ungenaso phezu abandayo Winter okwamanje, ke Zermatt e Switzerland kuyinto ukubheja kuhle ukuthola iqhwa. Enye yezinto ezidume kakhulu zokungcebeleka Europe, powder ngokuvamile ezinhle kuze kube yilapho ngisho ekupheleni April.
Njengoba iningi Zermatt sika ski endaweni amanga ngenhla 2000 amamitha, akukho ukushoda iqhwa uma kuziwa kumile Ukushushuluza. Iqhwa kungaba patchy edolobheni. Nokho, ukhuphuke intaba, uzothola okuthile okuhlukile. fresh iqhwa, amathrekhi isetshenzwe, futhi amaningi kumnandi kukhona ongayithola. Ukuze ukuzwa amandla aphelele zeqhwa fresh, kuyilapho uphephile, ukuqasha ski ezoxoxa Ukushushuluza off-piste.
Zermatt akusho kuphela isikhalazo ukuze labo ukukuthanda adventure, kodwa futhi unalo eminye imisebenzi emangalisayo kulabo imiphefumulo kancane entsha kakhulu. Winter nokuzula e Zermatt ubhekwa phakathi kakhulu ebabazekayo esifundeni. Imephu zonke Kuzonyuka ebusika ingatholakala kwi Zermatt ezokuvakasha iwebhusayithi. Asikho isidingo ngoba umhlahlandlela, njengoba emizileni ibhalwe kahle, uzilungise, futhi ephephile.
izindawo Omkhulu eYurophu Vakashela ngoMashi: Northeast, Holland
Uma uke wavakashela izingadi eLondon ukubona izimbali, kungani hhayi ukuqhubeka lo mkhuba? Catch isitimela eHolland! yonyaka Tulip yokuqhuma Holland ka iyisici ukuthi izinkulungwane zabantu abahambi unyaka ngamunye. Futhi ukuzonda ngesizathu esihle! Mashi kuyisikhathi enkulu ukuvakashela kube njengoba kuthanda wena qiniseka uphuthelwe izixuku. Lokhu kusho ukuthi Tulips ngokwabo angeke avele okwamanje. Ungakwazi namanje ukujabulela umbukwane kweqhwa abamhlophe, daffodils, futhi pink langa futhi violet eseshumi. Lesi sakamuva sivela khona kanye emkhawulweni phakathi kukaMashi no-Ephreli. Kunjalo, izimo zezulu ayahluka ngonyaka, ngakho-ke kungcono ukuthi uthintane ozinikele Tulip iwebhusayithi zesizwe I-masonto onke imbali izibuyekezo, okuyinto ukuqala ngoMashi.
Ukubhuka uhambo lwakho isitimela esilandelayo usebenzisa Gcina a zemininingwane
izindawo Omkhulu eYurophu Ukuze Vakashela ngoMashi iposi blog, ugculiseke? Kungani ungake uzinike 3 imizuzu bese uthola ithikithi isitimela saveatrain.com. Gcwalisa usuku nesikhathi ongathanda ukuhamba futhi thina izokunikeza intengo engcono ukuze nithathe uhambo lwenu, futhi ungakwazi ukukhokhela uhambo lwakho isitimela ngezindlela eziningi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#mashi #nbangibhabhi europetravel Spring trainjourney uhambo ngesitimela imvuenline travelnetherlands uktravel